Zvinoshamisa Nyowani Email Dhizaini (Inodiwa) | Martech Zone
Zvinoshamisa Nyowani Email Dhizaini (Inodiwa)
Chitatu, June 25, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Heino imwe email yandinoda kuwana, asi kazhinji usaite chero chinhu nayo! Iyi ndiyo Downtown Indianapolis, Zvinoshamisa Itsva Email.
Ini ndinogara ndakanyoresa nekuti ndinovimba kuti dhizaini nyowani inouya - iyo ruzivo kune kusimudzira kudhorobha Indianapolis zviripo zvese, asi dhizaini inoita kuti email isaverengeka uye isashande. Heino chikonzero:
Iko hakuna chikuru chinongedzo mumusoro ruzivo kune iyo chaiyo webhusaiti ye Zvikamu Indy Downtown Inc. Pamwe iko kutarisa, asi ndinofunga zvinonyatso kuida.
Mifananidzo iri mumusoro idiki uye haina basa - ini handigone kuigadzira. Kufungidzira kwangu ndekwekuti chero munhu akagadzira iyo email ine resolution diki pane zvandinoita pamwe vangangoita kunge vakakura. Vari kutora nzvimbo yakakosha 'pamusoro peganda'… iyo nzvimbo inonyatso vanhu anogona ona pavanovhura iyo email mune yavo mutengi.
Ndima yekutanga kuruboshwe, Izwi kubva kuIDI, izita rakashata uye risingamanikidze. Pamwe vanhu havatozive kuti IDI chii?
Saizi yefonti idiki, haina kuverenga, uye haina mabhureki endima kana mabara kutendera maziso angu kuti aone zvirimo. Nekuda kweizvozvo, handina kuverenga. Mufananidzo wacho waive wekudaidzira kukuru, zvakadaro!
Zviitiko zvekarenda ndizvo zvimwe chinhu chakanakisa nezveiyi email, asi hapana kufona kuti zviitwe pazviitiko… ndipe chinongedzo chekutenga matikiti uye ndiwane rumwe ruzivo pachiitiko chimwe nechimwe kuti ndiende! Ini handisi kuzoona chiitiko pano uye enda unotsvaga paGoogle. Handina nguva yeizvozvo!
Zvemukati zvakapwanywa uye zvakapetwa mumakoramu matete zvisina basa. Vanhu vari pamamonitor akakurisa izvozvi nezvisarudzo zvakafara… fambisa kune 800 kusvika 1000 pixel yakafara fomati. Sezvo karenda yako iri kurudyi padivi, mushandisi haafunge kupuruzira yakatwasuka kuti asvike padivi uye ozoverenga.
mazwi uye ndizvo
Iko kunofanirwa kuve neinenge kamwe chete kunotyisa kufona kuti chiitwe kune iyo email. Unoda kuti ndishanyire Musika weGuta here? Kutenga tikiti rekonzati? Ndipe runhare rumwe chete rwekuita pane kuita sarudzo yemakumi mana.Ndiudze zvakawanda nezvechinhu chimwe kupfuura zvimwe zvese zvinozondiendesa ikoko.
Sanganisa mapeji ekumhara uye akatorwa kana iwe uchinetseka nezve kamuri. Nyora pfupiso pfupiso ine chinongedzo kune iyo 'izere nyaya' iyo inondiunza kune peji ine imwe yekufema imba uye neruzivo rwekuwedzera.
Mifananidzo yevanhu iripi? Kusava nemifananidzo yekunyemwerera yevanhu mune ino email kunoita kuti ndinzwe sekunge ndiri kuverenga bhurocha kana chinyorwa chenhau. Mifananidzo yevanhu vanonakidzwa nezviitiko izvi nenzvimbo mudhorobha Indy ichabatana neni.
Chii chakaitika svondo rapfuura? Zvakadii nezvekudzokorodza kukuru kwechiitiko kana bhizinesi rawakasimudzira paemail nemamwe makomendi kubva kuvaverengi nezvekuti inguva yakanakisa sei yavaive nayo. Ita kuti ive yako pachako!
Pfungwa yangu haisi yekurovera iyi email. Sezvandataura, yakazara neruzivo rukuru… pamwe yakawandisa! Zviripachena kuti vanhu vakanyora kopi vakaita basa ravo rechikoro - zvinongoda mharidzo iri nani kuitira kuti vaverengi vagone kuishandisa uye kuitise pazviri.
Tags: adwords mhando mamakigoogle adwords mhando mamakihtaccesslogo optimizationtsananguro dzemafoniisiri-wwwmhando mamakiSocial Media Marketingwebsite optimizationwww
Kwidziridzo paCisco I-Prize Finals
Kwayedza Hutungamiri neTerecommuting
Jun 25, 2008 pa 7: 32 PM
Dai ndaiva vagadziri / vanyori veemail ndaishora. cheka kopi neinenge 1/2. Unogona kubatanidza zvimwe zvinyorwa kune imwe peji yezvinyorwa.
Nzira yekukopa yakawanda kune email.